हल्ला सुनेर राती यी जोडीले पुलिस बोलाए, अनुसन्धान गर्दा यस्तो ‘चिज’ भेटियो जसले गर्दा पुलिस नै भए चकित ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/हल्ला सुनेर राती यी जोडीले पुलिस बोलाए, अनुसन्धान गर्दा यस्तो ‘चिज’ भेटियो जसले गर्दा पुलिस नै भए चकित !
हल्ला सुनेर राती यी जोडीले पुलिस बोलाए, अनुसन्धान गर्दा यस्तो ‘चिज’ भेटियो जसले गर्दा पुलिस नै भए चकित !
एजेन्सी। अमेरिकाको उत्तरी क्यारोलिनामा बस्ने एक जोडीले नयाँ खरिद गरेको रोबोट भ्याक्युम क्लिनरको आवाजलाई चो’र ठानेर पुलिस बोलाए । पुलिसले घरभरी अनुसन्धान गर्यो तर चो’र भेटिएन । ती जोडीले जुन आवाज सुनेका थिए त्यो रोबोट भ्याक्युम क्लिनरको भएको पाइयो ।
फेसबुक पोस्टमा थोमस मिलनले लेखे, ‘आइतबार–सोमबार राती साढे १२ बजे म श्रीमती एलिसासँग फिल्म हेरिरहेको थिएँ । त्यतिबेला आवाज सुनियो । त्यो कुकुर बिरालोले निकालेको जस्तो आवाज फिटिक्कै पनि थिएन । मलाई चो’रको जस्तो आ’शंका थियो । त्यसकारण मैले बन्दु’क निकालेँ र चो’र देख्नेबित्तिकै टा’उको ताकेर हा’न्छु भन्ने सोचेँ । दुई वर्षकी छोरीको कोठामा चो’र छ कि भन्ने पनि मलाई शं’का लाग्यो ।’
उनीहरुको घरमा पुगेका पुलिसले घरभरी अनुसन्धान गर्दा सिँढीमा राखिएको रोबोटबाट आवाज आएको बताए ।
थाहा छैन रोबोट आफैं कसरी अन भयो ?
थोमसले भने, ‘हामी यो देखेर अचम्मित भयौं । मैले र एलिसाले दुई दिन अघि मात्रै सफा गर्न रोबोट भ्याक्युम क्लिनर खरिद गरेका थियौं । हामीले यसको नाम ह्यारी राखेका छौं । थाहा छैन यो आफैं कसरी अन भयो जबकी हामीले यस्तो कुनै शेड्युल तय गरेका थिएनौं । रोबोट सिँढी मुनी अड्किएको थियो र बारम्बार भित्तामा ठो’क्किएको थियो । त्यसै कारण आवाज आइरहेको थियो ।’
पैसा सापटीको निहुँमा मिल्ने साथीको ह’त्या
सुन्दा अचम्म लाग्न सक्छ : छु’रीले मसाज गरेर यस्तो ग’म्भीर रो’गको उपचार ! थाहा पाउदा सबै चकित !